Ixabiso lesakhiwo esenziwe ngentsimbi engenazingca kubugcisa boluntu
Ukusuka kwinkqubo yophuhliso, ubugcisa boluntu buveliswa kwaye buphuhliswa ngokwesiseko sophuhliso oluqhubekayo loluntu, uqoqosho kunye nezopolitiko. Ngotshintsho lwangoku kwimeko-bume yezentlalo kunye nemvelaphi yenkcubeko, ubungakanani bezobugcisa boluntu nazo zenze iinguqu ezithile. Ukuya kuthi ga apha ...
Luhlobo luni lwemifanekiso eqingqiweyo edolophini esiyifunayo?
Njengomsebenzi wobugcisa kwiindawo zikawonke-wonke zasezidolophini, ubukhulu becala umfanekiso oqingqiweyo wasezidolophini yinto yemo engqongileyo yasezidolophini, ukubonakaliswa okugxininisiweyo kwenkcubeko yenkcubeko yasezidolophini, kunye nomqondiso obalulekileyo womoya wedolophu. Ngophuculo oluqhubekayo lokuqonda kwabantu kunye nemfuno yenkcubeko kunye neendawo zedolophu ...
Iindidi kunye neentlobo zemifanekiso eqingqiweyo
Imifanekiso eqingqiweyo yahlulwe yaziindidi ezimbini: umfanekiso oqingqiweyo kunye noncedo. 1. Umzobo oqingqiweyo Oko kubizwa ngokuba ngumzobo oqingqiweyo kubhekisele kumfanekiso oqingqiweyo onamacala amathathu onokuthakazelelwa kumacala amaninzi nakwii-engile. Kukho iindlela ezahlukeneyo kunye neefom, kubandakanya eziyinyani kunye nokuhombisa, co ...